Jereo ny Pricing CRM - Manome hery ny Salesforce amin'ny 80% Fandaniam-bola
Atombohy amin'izao fotoana izao, Safidio ny drafitra taty aoriana
Andramo ny CompanyHub maimaimpoana amin'ny andro 14, miaraka amin'ireo endri-javatra rehetra. Tsy mila carte de crédit.
Natao isan-taona Billed Monthly
10 + mpampiasa? Mitadiava vola vidiny
$ 12 / mpampiasa isam-bolana
Rs.850 / mpampiasa isam-bolana
Natao isan-taona (Save 33%)
$ 18 / mpampiasa isam-bolana
Rs.1275 / mpampiasa isam-bolana
(Save 33% amin'ny drafitr'ity taona ity)
2 - alalana mailaka mandeha
Email tsy afaka mandeha tracking, na amin'ny Gmail aza
Ampahatsiahivo raha tsy misy valiny
Fitantanana izay afaka mahita ny saha
Ampifandraiso amin'ny apps 100s
Ny fisamborana dia mitarika amin'ny tranonkala
$ 27 / mpampiasa isam-bolana
Rs.1925 / mpampiasa isam-bolana
Dashboards & tantely 20 +
Ny tatitra manokana, na dia eo amin'ny sehatra mahazatra aza
Karazana karazana maro
Ny horohoron-tany mifototra amin'ny sary
$ 24 / mpampiasa isam-bolana
Rs.1500 / mpampiasa isam-bolana
$ 36 / mpampiasa isam-bolana
Rs.2484 / mpampiasa isam-bolana
Manapaka ny asan'ny workflow
Fampandrenesana / fihetsika voaomana
Fiovana lehibe / fihetsika
Mamorona lojika manokana (tsy misy code!) Mba hamolavola ny fizotry ny raharaham-barotra
Handefa mailaka / alam-barotra
Manangana asa / rakitra hafa
$ 33 / mpampiasa isam-bolana
Rs.2277 / mpampiasa isam-bolana
$ 49 / mpampiasa isam-bolana
Rs.3380 / mpampiasa isam-bolana
Fampiasana fanampiny ho an'ny indostria
Fampiasa manokana hampiasana fomba hafa
Tatitra & automatisation amin'ny Tabila Custom
Mamoron-dresaka amin'ny mpikaroka ao amin'ny 1
Levitra Order & Inventory
Territory Management / Rules based visibility
Hanomboka ny fitsarana malalaka izao
14 Days Free Trial. Tsy mila karaoty.
Nahoana no tokony hifidy Company Hub aho?
Tena voafetra ho an'ny indostria
CompanyHub dia iray amin'ireo CRMs mahazatra indrindra amin'ny SMBs. Miaraka amin'ny tsindry tsotsotra tsotra dia azonao atao:
Hanamboatra saha, tsanganana, filtriatra, sns.
Manaraha na mandamina na inona na inona miaraka amin'ny latabatra mahazatra toy ny Payments, Courses, Properties etc.
Mifameno ny zava-drehetra ary alaivo ny fomba fijery 360.
Fakafakao zavatra amin'ny tatitra
UTrons - Manamboara ny workflow miaraka amin'ny Drag-Drop
Ny UTrons CompanyHub dia mamela anao manamboatra ny dingana rehetra amin'ny fanaovana tablety fotsiny. ohatra:
Manaova dika mitovy
Mamorona tanjona rehefa miova ny taova
Mamorona fifanarahana mahakasika rehefa noforonina ny orinasa
Fanavaozana ny fifanarahana
Alefaso mailaka / mailaka fanoratana avy amin'ny mailaka / daty fampahatsiahivana
Mora tahaka ny CRM Excel
Ny ekipanao dia hampiasa tena
Excel toy ny visualization izay mamela anao ny ankamaroan'ny zavatra avy amin'ny pejy tokana - mamorona lohateny, manova ny sela, mandefa mail, mampiditra note / asa / resaka, sns.
Fiarovana - Manaraha-maso tanteraka izay afaka
jereo izay data
Afaka mandamina mora foana ianao hoe iza no mahita ny rakitsoratra sy ny saha.
Fivoaran'ny fiantohana fiantohana
Ny ekipa mpanohana anay dia nomena ny 100% amin'ny G2Crowd satria mandeha foana ny milina fanampiny hanampy ireo mpanjifanay.
Mitadiava ny herin'ny CRMs momba ny orinasa tsy misy ny olana sy ny fandaniana.
Mbola misy fanontaniana?
Nahoana ianao no mividy anao? Inona no mahatonga anao manokana?
Niasa tamin'ny CRM izahay nandritra ny 8 + taona. Izany dia nanome antsika ny fahatakarana ny filan'ny orinasa samihafa. Nampiasa CRM maro ihany koa izahay ho an'ny ekipanay mivarotra. Izany dia nahatonga anay hahatsapa fa ny ankamaroan'ny CRM dia tena tsotra loatra na sarotra loatra. Ankoatra izany, tsy manana fitaovana fivarotana ilaina izy ireo toy ny fanaraha-maso an-tserasera, fanaovana tatitra etsy sy eroa. Nalahelo izahay, nanapa-kevitra ny hanangana azy io izahay. Koa satria orinasa tena mifantoka amin'ny rafitra izahay, dia afaka nanangana CRM tena mora nefa tena matanjaka izay manampy ireo orinasa hitombo.
Inona avy ny vokatra ho azoko avy amin'izany?
CompanyHub dia hanampy anao amin'ny fomba 3. 1. Ho afaka hikarakara mora foana ny fitarihanao ianao ary hitarika fitarihana bebe kokoa. Ka mitombo ny varotrao. 2. Izany dia hampitombo ny vokatra avy amin'ny ekipanao. Ny solontenanao dia afaka manavotra ora maromaro ary mampiasa izany mba hifantohana amin'ny varotra. 3. Hahita mazava tsara ianao. Azonao atao ny manara-maso ny fitarihana rehetra, ny resaka ataon'izy ireo, dia mifampiraharaha amin'ny toerana afovoany. Azonao atao koa ny mamakafaka zavatra amin'ny tatitra mafonja. Noho izany dia mahazo ny zava-drehetra mba hitomboan'ny orinasa.
Misy fifanarahana maharitra ve?
Matoky izahay fa ny CompanyHub dia hanamarina ny hasarobidiny ao anatin'ny andro vitsivitsy. Izany no mahatonga anay tsy mitaky fifanarahana maharitra ary afaka misafidy ny drafitra isam-bolana. Azonao atao ny miantsena, mandoa isan-taona mba hahazo fihenam-bidy bebe kokoa.
Inona no tafiditra amin'ny antso fanofanana?
Ao amin'ny antso an-tariby, iray amin'ireo mpanolo-tsaina CRM dia hanolo-tena ho anao ary hahatakatra ny zavatra takinao izy ireo. Aorian'ny fahatakarana ny fepetra izay hitondrany anao mba hahazoana ny tsara indrindra amin'ny kaonty CRM CompanyHub. Hahazo demo ianao araka izay takinao. Azonao atao koa ny mampiditra ny ekipanao amin'ny demo.
Ahoana no ahafahako manolotra izany amin'ny ekipako?
Afaka manasa mivantana ny ekipanao amin'ny kaonty CompanyHub ianao mba hahafahan'izy ireo manomboka mampiasa izany. CompanyHub dia mora ampiasaina ary azontsika antoka fa ny ekipanao dia hanomboka amin'ny andro 1. Na izany aza, raha misy fanontaniana, dia afaka mifandray amin'ny ekipa mpanohana anao ny ekipanao ary afaka mitari-dalana anao bebe kokoa izy ireo.
Moa ve ianao manaiky GDPR?
Fantatsika fa tranokala mavesatra any izany ary manome lanja ny safidin'ny mpanjifa isika hiantehitra amin'ny CompanyHub amin'ny fampahalalana rehetra momba ny mpanjifany. Mba hanarahana an'io CompanyHub io dia feno ny GDPR.
Manao ahoana ny tahirin-tsariko?
Ny fiarovana an-tsoratra dia zavatra iray tena ilaintsika eto amin'ny CompanyHub. Raha ny marina dia manome anao ny sehatra fiarovana 5 ho an'ny orinasa: 1. Manangona tahiry ho an'ny mpanjifa rehetra 2. Fandefasana rakitra azo antoka amin'ny fampiasana SSL toy ny banky 3. AWS server, ampiasain'ny tranonkala 4. Hamarino ny fiarovana an-trano 5. Fiarovana amin'ny ambaratonga.
Raha mandefa mailaka be dia be ny adiresy mailaka ampiasaina?
Raha oharina amin'ny mailaka ara-barotra dia mampiasa ny adiresy mailaka sy server anao manokana ianao mba handefa mailaka (isaky ny iray). Noho izany dia mety ho betsaka lavitra noho izany ny fahafaha-mailaka alefanao amin'ny alàlan'ny fidirana voalohany amin'ny prospect.
Firy ny mailaka azoko alefa mampiasa CompanyHub?
Ny ankamaroan'ny mpamatsy mailaka dia manana fetra isan'andro, izay ankamaroan'ny 100s. Azafady azafady ny fetran'ny fandefasana isan'andro amin'ny fandefasana mail. CompanyHub dia manome ny 1000 isan'andro.
Aiza ny fampahalalana nomeko?
Mampiasa serveur AWS izahay, izay ampiasaina amin'ny ankamaroan'ireo tranonkala lehibe.
Ho tafiditra amin'ny rafitra hafa ve izany?
Amin'ny safidy samihafa toy ny Zapier, PieSync ary API, ny CompanyHub dia afaka miditra amin'ny fampiharana malaza.
Tena sarotra ny manomboka amin'ny CompanyHub?
Ny fampiasana CompanyHub dia mora toy ny manintona. Ny zavatra rehetra tokony hataonao dia mamorona ny kaontinao ary manomboka. Raha misy fisalasalana na fanontaniana dia azonao atao foana ny manolo-tena amin'ny mpanjifa anao.
Inona no atao hoe UTron ary ahoana no iasany?
UTron no boaty mivarotra anao manokana izay hanampy anao hanamboatra ireo asa mahasarika rehetra. Amin'ny teboka iray sy tsindrio fotsiny dia afaka mamorona UTrons anao ianao mba hamolavola ny fizotran'ny raharaham-barotra rehetra tsy misy andalana code.
Hiasa amin'ny orinasa finday ve ny CompanyHub?
Mino tanteraka izahay fa tranonkala mobile-voalohany ary tsy te-hametra ny varotra mpanjifanay amin'ny biraony izahay. Izany no mahatonga ny CompanyHub ho mora amintsika ny fampiharana finday ho an'ny Android sy iOS, izay natao ho an'ny "lavitr'ezaka foana" ho an'ny vahoaka. Noho izany ny zavatra rehetra ilainao dia kapoaka fotsiny.
Manana ny birao napetrako any amin'ny toerana samihafa aho, moa ve ity asa ho ahy ity?
Eny, CompanyHub dia vahaolana tonga lafatra ho anao raha manana ny biraonao ny toerana misy anao any amin'ny toerana samihafa. Miaraka amin'ny CompanyHub dia afaka manapa-kevitra hoe iza no afaka mahita izay fampahalalana. Ny ekipanao rehetra koa dia afaka miara-miasa mora foana amin'ny toerana iray raha mahita maso tanteraka ianao. Azonao atao koa ny mamorona tatitra mahaliana ao anatin'ny minitra vitsy.
Hisy olona ve raha mila fanampiana isika amin'ny fametrahana ilay kaonty?
Eny, ny ekipa mpanohana dia ho hafatra fotsiny ihany rehefa mila izany ianareo. Na oviana na oviana na ianao na ny ekipanao dia manana fisalasalana na fangatahana hafatra / mailaka fotsiny ny ekipanay ary ho faly izy ireo hanampy anao. Ny ekipan'ny Support Team BTW no hany orinasa nahazo ny valim-pifandraisana 100 tao amin'ny lisitry ny CRM Spring an'ny High CRX.
Ny ekipa mpanohana anay dia tia manolotra ny mpanjifanay
Ny mpanjifanay dia nampahafantatra ny fitiavana Rating Them 100% Amin'ny G2Crowd!
Fanampiana amin'ny fananganana kaonty